Real Madrid Oo U Awood Sheegatey Dhigeeda PSG +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Real Madrid Oo U Awood Sheegatey Dhigeeda PSG +SAWIRRO
Real Madrid ayaa si awood leh ku garaacday Paris Saint Germain kulan xiiso lahaa oo ay labada kooxood ku wada ciyaareen garoonka Santiago Bernabeu, kooxda ka dhisan caasimadda waxey qeybahii dambe la timid laba gool oo quus istaajiyay wiilasha Unai Emery.
Real Madrid waxey ku bilaabatay kulanka sida koox dooneysa iney xakameyso kulanka oo dhan, balse Paris Saint Germain si gaabis ah ayey wax ula qeybsaneysay iyadoo kaliya xidigaha weerarka ay saameyn lahaayeen.
Cristiano Ronaldo ayaa helay laad xor ah oo la dhigay afka hore xerada ganaaxa, balse ugama faa’ideynin kooxdiisa, maadaama uu kor iska mariyay.
Mar kale Ronaldo wuxuu helay fursad qaali ah maadaama uu ka hortagay goolhayaha isagoo kubad cajiib ah ka helay Marcelo, balse goolhayaha ayuu ku garaacay.
GOAL: Daqiiqadii 32-aad: Adrien Rabiot ayaa hogaanka u dhiibay PSG, si qurux badan Mbappe ayaa kubadda usoo dhigay xerada ganaaxa, Cavani ayaa ka booday, Neymar ayaa cirib ku taabtay, kadib ayuu Rabiot shabaqa aadiyay.
GOAL: Daqiiqadii 44-aad: Ronaldo ayaa dhaliyay rigoore loo dhigay, si fiican ayuuna u dhameystiray, Los Celso ayaa dhulka dhigay Kroos, taasoo garsooraha uu rigoore tilmaamay.
Qeybtii labaad Madrid waxey durba lasoo laabatay qaab ciyaareed cajiib ah, halka Paris Saint Germain ay qudheeda isku daydayiney xukunto kulanka.
GOAL: Daqiiqadii 83-aad: Cristiano Ronaldo ayaa jilibka ku dhaliyay, kubad uu dhinaca kasoo qaaday Asensio, balse uu goolhaya isku dayay inuu iska saaro.
GOAL: Daqiiqadii 86-aad: Marcelo ayaa si awood leh shabaqa kubad ugu shubay markii uu caawinaad ka helay Asensio.